एमाओवादी नेता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ । मुलुक एकातिर गइरहेको बेलामा किरण आफ्नै पारामा "सिद्धान्त र क्रान्तिको झण्डालाई रक्षा गर्न" सङ्घर्षमा ओर्लनुभएको छ । देशभक्त, वामपन्थीहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको ठान्ने किरण आफ्नो पार्टी नेतृत्व आत्मसमर्पणवादी भएकोमा रुष्ट हुनुहुन्छ । सिद्धान्त र विचारमा लेनदेन नस्वीकार्ने किरण हाल अलिकता नरम देखिनुहुन्छ तर उच्च क्रान्तिकारी धारा र आत्मसमर्पणवादी धाराबीचको सङ्घर्ष अझ पनि चलिरहेको भन्न पनि चुक्नहुन्न । काँग्रेस, एमाले, आफ्नो पार्टी, शान्ति-संविधान, सरकार, धोबीघाटदेखि गोञ्जालोलगायतका विषयमा बिहीवार किरणसँग गोरखापत्रले लामो कुराकानी गर्‍यो । प्रस्तुत छ, किरणसँग गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरि एवं समाचारदाता उपेश महर्जनद्वारा लिइएको अन्तर्वार्ताको प्रमुख अंश :
देशलाई समाप्त पार्नेसँग एक्लैले भए पनि लड्छु ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्नुमा हाम्रो पनि हात छ कि प्रश्न गर्नुभयो, त्यो बिल्कुलै होइन ।
हाम्रा पार्टीका विभिन्न विचार समूहहरूमा पनि प्रवृत्तिहरू र कमी कमजोरी छन् ।
साँच्चिकै शान्ति, संविधान र एकताको पक्षमा छौं ।
शान्तिको अर्थ सेना समायोजनमात्रै होइन । हामीले भनेको शान्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता ठीक हुनुपर्‍यो ।
जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नु ठीक हो तर वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी प्रहरी लगाएर घरजग्गा फिर्ता गर्ने पार्टीको निर्णय थिएन ।
हाम्रो पार्टीको नेताले हरेक क्षेत्रमा आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेको छ । हाम्रो पार्टीको एमालेकरण हुँदैछ ।
काँग्रेसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ व्यावहारिक हुनलाई ? व्यावहारिकभित्र काँग्रेसको राजनीति छ ।
हामीले गरिरहेको सम्झौतामा लेन भने केही छैन देन मात्र छ ।
हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर एकताबद्ध हुनेछौं ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेहरूले समस्या माओवादीमा नै देख्नुहुन्छ । हामीहरूले उहाँमा समस्या देख्छौं ।
नेतृत्वले गरेका गल्तीहरूलाई सच्चाउने दिशामा अझ हामीहरू छौं ।
म चुनौती दिएर भन्छु म एउटा गुट छोडेर कहीँ गएको छैन ।
अध्यक्षले थुप्रै प्रश्नहरूको उत्तर दिएपछि बहस र छलफलबाट सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं ।
पार्टी फुटाउने समाचार मैलै पनि सुनें । त्यो त गलत भयो भनेर बाहिर पनि भने र गौरवलाई पनि सोधें ।
किरणजी, केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकमा शान्ति, संविधान र एकताको पक्षमा धेरैजना देखिए यसलाई तपाइर्ले कसरी हेरिरहनुभएको छ ? तपाईं कतातिर हुनुहुन्छ ?
हामी केन्द्रीय समितिमा शान्ति, संविधान र एकताका पक्षमा धेरैजना होइन कि सबै पक्षमा छांै । यो कसरी देखाइयो भने हाम्रो पार्टीमा हाम्रो पक्षलाई शान्ति, संविधान र एकताको विरोधीको रूपमा असाध्य दुष्प्रचार गरिएको छ । त्यो नितान्त गलत हो । हामी साँच्चिकै शान्ति, संविधान र एकताका पक्षमा छांै ।
तर पछिल्लो समयमा यहाँको पार्टीमा निक्कै किचलो भइरहेको छ नि, यस्को कारण के होला? पार्टी फुट्ने कुराहरू पनि आएका छन्, ?
हामंरो पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष र दुई लाइन सङ्घर्ष तीव्र गतिमा छ । यो कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष र दुई लाइन सङ्घर्ष चल्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर अहिले अलि तीव्रतामा छ । कारण, हाम्रो पार्टी देश र जनताको हितमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । दश वर्षको जनयुद्धको प्रक्रिया उत्कर्षमा पुगेको छ । एउटा, १५ हजारको हाराहारीमा जनताका छोराछोरीको सहादत भएको छ । त्याग, बलिदान धेरै भएका छन् । कैयांै बेपत्ता पारिए, घाइते र अपाङ्ग भए । अहिले त्याग र बलिदानको मूल्यलाई शान्ति र संविधानमा संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर गम्भीर बहस र छलफल भइरहेको छ । जेसुकै गरेर पनि शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने एउटा पक्ष छ । शान्तिको अर्थ सेना समायोजन मात्रै होइन, सेना समायोजन पनि आत्मसमर्पण गर्ने तरिकाले । हामीले भनेको शान्तिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हुनुपर्‍यो । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता ठीक हुनुपर्‍यो । जनताको पक्षमा संविधान हुनुपर्‍यो र जनमुक्ति सेनाको पनि नयाँ ढङ्गले सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्‍यो । यसरी हामीले शान्तिको परिभाषा यसरी गरिरहेका छांै । अर्काे पक्ष, आत्मसम्मानमा ठेस पुगे पनि जसरी पनि सेना समायोजन जाने भनिरहेको छ । जनताको पक्षमा संविधान बनाउने कुरालाई ध्यानमा नराखेर कैयांै कुरालाई छोड्दै गइराखेको छ । यही सन्दर्भमा एकता हुनु भन्नुको अर्थ विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशासँग जोडेको हुन्छ । विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशालाई उपेक्षा गरेर अथवा क्रान्तिकारी लाईनलाई छोडेर यान्त्रिक प्रकारको एकताको कुरा उठिरहेका छन् । हामी त्यसका विरोधी छांै ।
केन्द्रीय समितिको बैठक भइरहेकै अवस्थामा आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादविरुद्ध तपाइंर्ंको पक्षको अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले सांस्कृतिक भण्डाफोर गर्दैछ । यो कस्तो लाइन सङ्घर्ष हो ?
यो जटिल छ । हाम्रो जिम्मेवार साथीहरूले र मूल नेतृत्वले पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई ध्यान नदिई एकलौटी रूपमा काम गर्दै बाहिर गएपछि हामी सडकमा जान बाध्य भयांंै । उदाहरणको रूपमा जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्ने कुरा आयो । फिर्ता गर्नु ठीक हो तर वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो निर्णय त्यो थियो । वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन प्रहरी लगाएर घरजग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय थिएन । पार्टीको निर्णय जिम्मेवार नेताहरूले तोड्ने काम भयो । त्यस्तै, पार्टीको निर्णयमा बिपा गरेर आउने भन्ने कुरा थिएन नि । अरू पार्टीले पनि विवादित विषयमा निर्णय गर्नुहुन्न भनिरहेका थिए । एकाइ र सशस्त्र रूपमा सेना समायोजन गर्ने पार्टीको निर्णय थियो तर व्यक्तिगत र निशस्त्र रूपमा सेना समायोजन गर्ने निर्णय एक पक्षले गर्‍यो । त्यसका कारण, थुप्रै कुरा बाहिर आएका छन् । थुप्रै निर्णय मूल नेतृत्वले उल्लङ्घन गर्‍यो । मूल नेतृत्वले पार्टीका आधिकारिक निर्णय तोड्दै गएपछि निर्णयको रक्षाका लागि सडकमा गएको हो । सडकमा किन गयो भन्ने आश्चर्यको विषयमा पनि छ, यो त एक प्रकारको विद्रोह न हो । मान्यता स्वयं लिडरसिपले तोडेपछि हालत त्यस्तै हुन्छ ।
तपाईंहरूको पार्टीमा हार्ड लाइनर र सफ्ट लाईनरबीच निक्कै दूरी बढेको छ । त्यहाँ मिलनबिन्दु नै छैन जस्तो देखिन्छ । दुईटाको बीचमा राष्ट्र कहाँ छ, तपाईं व्यावहारिक हुन सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
हाम्रो पार्टीको दुई लाइन सङ्घर्ष नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्षेत्रमा उच्च क्रान्तिकारी धारा र अवसरवादी धाराबीचको सङ्घर्ष हो । हाम्रो पार्टीको नेताले हरेक क्षेत्रमा आत्मसमर्पण गर्दै गइरहेको छ । हामी त्यसरी जानुहुँदैन । हाम्रो पार्टीको एमालेकरण हुँदैछ । २०४७ सालमा जसरी एमालेले सबै छोडेर गयो त्यही दिशामा हाम्रो पार्टी गइरहेको छ । त्यसैले हामीले सिद्धान्त र क्रान्तिको झण्डालाई रक्षा गर्नका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका छांै । तपाइहरूले अलि व्यावहारिक भएन भन्नुहुन्छ तर व्यवहारको फेसन कस्तो हुन्छ भने जसले जे भन्यो त्यही मान्यो भने व्यावहारिक हुने, काँग्रेसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ व्यावहारिक हुनलाई । व्यावहारिकभित्र काँग्रेसको राजनीति छ । त्यसैले व्यावहारिक हुनलाई छोड्दै जाने सम्झौता भएका छन् । सम्झौताको अर्थ त लेनदेन हो तर हामीले गरिरहेको सम्झौता कस्तो भने लेन भने केही छैन सबै देन मात्र छ । जनता, देश, क्रान्ति र रूपान्तरणको पक्षमा हामीले आवाज उठाइरहेका छांै । मिलनबिन्दुका लागि अन्तिम बिन्दुसम्म एकताको लागि एकताबद्ध भएर जान्छौं तर त्यो एकता पुरानो खालको हुँदैन रूपान्तरणसहितको एकता हुन्छ । हाम्रा कमीकमजोरीलाई सच्याएर एकताबद्ध हुन्छांै ।
त्यो दिशामा प्रगति भएको छ कि छैन ?
केन्द्रीय समितिको बैठकमा राम्रै बहस भइरहेका छन् । पार्टी एकताबद्ध हुन रूपान्तरणसहितको एकता हुनुपर्छ भन्ने छ ।
शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि माओवादीभित्रै समस्या छ भनिरहेका छन् अरूहरूले के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले समस्या माओवादीमा नै देख्नुहुन्छ । हामी उहाँहरूमा समस्या देख्छांै । उहाँहरू र हामीमा फरक छ । अरूमा भए पनि सिद्धान्त र विचारमा लेनदेन हुँदैन । सिद्धान्त र विचारमा लेनदेन गर्ने पक्षमा हामी छैनांै, म छैन । नयाँ जनवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा कसरी लेनदेन हुन्छ ? हुनै सक्दैन । क्रान्ति पूरा भयो भन्ने एउटा पक्ष -अध्यक्ष पक्ष छ । तर हामी त्यस्तो मान्दैनांै ।
जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने पक्षमा ?
हो नि, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो भने पक्षमा छन् । अलि थोरै कार्यभार बाँकी छन् । जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्ने पक्षमा छन् । हामीले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको छैन भनेका छांै । त्यसैले यस्ता कुरामा लेनदेन हुँदैन ।
त्यस्तै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका कुरामा दिनदिनै सीमास्तम्भ सारिएका, मिचिएका समाचार आइरहेका छन् । नेपाल रहने कि नरहने भन्ने कुरा आइरहेका छन् । देशको निम्ति लेनदेन गर्न सकिंदैन । यस्ता जटिल विषय छन् । यो विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा फरक मत राखेका छांै । नेतृत्वले गरेका गल्तीलाई सच्याउने दिशामा अझै हामीहरू छौं । पार्टी फुट्ने भन्ने होइन प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गर्ने कुरा हो । मलाई फुटवादी भनेर देखाउँछन् । म चुनौती दिएर भन्छु म एउटा गुट छोडेर कहीँ गएको छैन । मलाई पार्टी फुटाउन खोजेको भन्न सुहाउँछ ? थुप्रै मान्छे यताउता गएका छन्, आएका छन्, इतिहासमा कहीँ म गएको छैन, सिधा रूपमा एउटैमा छु । त्यसैले जो फुटवादी हो उसैले फुटको कुरा गर्छन् । पार्टीमा बहुमत र अल्पमतको कुरा मानिन्छ । सिद्धान्त र कार्यदिशाको क्षेत्रमा समान छ तर कतिपय कुरामा भिन्नता छ भने विद्रोह गर्ने कुरा आएन । असमान भयो भने सँगै बस्ने कुरा पनि आएन ।
जनवादी क्रान्तिका अधिकतम स्वरूपहरू पूरा भएको र अरू समाजवादी क्रान्तिमा पूरा गर्ने भन्ने अध्यक्षको विचारलाई तपाईंले नमानिरहेको अवस्थामा तपाईंहरूबीचमा समान सिद्धान्त र कार्यदिशा त भएन नि ?
हो, तपाइर्ंले ठीक प्रश्न उठाउनुभयो । यो विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेको छ । अध्यक्षले भनेको कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ । उहाँलगायतले स्पष्ट पारेपछि सिद्धान्त, कार्यदिशा र विचारको भिन्नताको मात्रा कति हो ? त्यही विषयलाई टुङ्गयाउनका लागि घनीभूत रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरिरहेका छांै ।
पार्टी फुटिसकेको र प्राविधिक रूपमा मात्रै तपाईर्ंहरू एकसाथ रहनुभएको तपाईंकै पक्षधरहरूले भनिरहेका छन् । अध्यक्षलाई गद्दारको आरोप पनि लागिसकेको स्थितिमा नजिक रहनुहुन्छ वा पार्टी फुटेर जनविद्रोहमा जानुहुन्छ ?
यहाँले गम्भीर विषय उठाउनुभयो, तलबाट धेरै आरोप आएका छन् तर जिम्मेवारहरूबाट एक अर्कामा आरोप लगाइएको छैन । अध्यक्षले थुप्रै प्रश्नको उत्तर दिएपछि बहस र छलफलबाट सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौ । बैठककैबीच बहस र अन्तक्रिर्या गर्दैछांै । यस्ाको बीचबाट कसरी जाने हो भन्ने हुन्छ । रूपान्तरणसहित एकताबद्ध भएर जाने भन्ने नै मूल प्रयास हुनेछ । भूमिगत भएको बेलामा यतिका कुरा बाहिर पनि जाँदैनथ्यो र थाहा पनि हुँदैनथ्यो तर अहिले पार्टी खुला भएका कारण मिडियामा गइहाल्छ । मिडियाले पनि अलि जिस्क्याउने तरिकाले तलमाथि गरेर अलि बढी प्रचार गर्छन् । तर रूपान्तरणका लागि मेरो पक्षको र मेरो प्रयास हुन्छ ।
औपचारिक रूपमा फुट्न लागेको सङ्केत महासचिव बादल र सचिव गौरवले गरेको भन्ने र तपाईं सेरेमोनियल अध्यक्षलगायतको फेहरिस्ता मिडियामा आएको थियो, यसको सङ्केत के हो ?
म सेरेमोनियल अध्यक्ष भन्ने बिल्कुल गलत हो । पार्टी फुटाउने र औपचारिक रूपमा मात्रै घोषणा हुन बाँकी भन्ने समाचार आए र मैले पनि सुनें । कसरी आए त्यो त गलत भयो भनेर बाहिर पनि भने र गौरवलाई पनि सोधंे । उहाँले त्यसरी भनेको होइन भनेर पनि भन्नुभयो । अलि मिडियाले बढाइचढाइँ गर्‍यो कि भन्ने लाग्छ ।
देश गम्भीर रूपमा रहेको बेला जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न र देशलाई उकास्न तपाईंको दायित्व के हुन्छ ? तपाईं त हरेक कुरामा जहिले पनि आलोचक देखिनुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिक स्थितिमा यो गम्भीर प्रश्न हो । देशमा बाहिरी मुख्यतः विस्तारवादी हस्तक्षेप इतिहासमा यो स्थितिमा कहिले पनि आएको छैन । माओवादी एउटा देशभक्त शक्ति हो । अरू त्यस्तो खालको छैन भन्ने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा अब माओवादी के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अन्यत्रबाट देशको विषयमा यताउति हँुदा हामी लड्ने माओवादी छौं भन्ने लाग्थ्यो तर हाम्रो भित्रै देशको माया नगर्ने भएपछि त गम्भीर भयो । त्यसकारण देशको रक्षाको निम्ति अन्तिम दमसम्म लडिन्छ । देशलाई समाप्त पार्नेसँग एक्लैले भए पनि लड्छु । म सम्झौता गर्दिन । सानो ठूलो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । देशको राष्ट्रिय अस्मितामा गम्भीर चोट लागेको छ । हामी शान्ति र संविधानका पक्षमा छांै ।
देशको निम्ति राजनीतिमा अडान लिने कुरा आयो । देशको निम्ति हामी मात्र होइन बाहिर रहेका देशभक्तहरू, वामपन्थी र जनवादीहरू एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्‍यो । सन् १९५० लगायत असमान सन्धिहरू खारेज नभएको अवस्थामा भकाभक बिपालगायत सन्धिहरू भइरहेका छन् । नदीनालालगायत प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न र समृद्ध पिछडिएको देश नेपालले भारतीय हैकम थेग्न सक्छ ? सदनलाईसम्म छलेर माथ्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रोको सम्झौता गरियो । यस्ाको निम्ति सशक्त पार्टीभित्र र बाहिर आवाज उठाउनुपर्छ । संशोधनवाद र राष्ट्रघातका विरुद्ध लड्नुपर्छ । देशको निम्ति देशभक्तहरू, वामपन्थी र जनवादीहरूको नयाँ संयुक्त मोर्चा आवश्यक छ ।
धोबीघाट कसरी भयो र तुरुन्तै टुट्यो, हिसाबकिताब नमिलेर भएको हो ? कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? त्यसलाई अवसरवाद मान्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
धोबीघाट ठूलो कुरो थिएन । त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्षले पालुङटारको बैठकपछि वैशाखको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामीलाई अल्पमतमा पारेर बाबुरामसँग घाँटी जोडिसक्नु भएको थियो । धोबीघाटमा हामीले सैद्धान्तिक रूपमा केही पनि निर्णय गरेका थिएनांै । साङ्गठनिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले एकता गरेका थियांै । अरू केही पनि भएको थिएन । पार्टीमा अध्यक्षको केन्द्रीकरण अलि बढी भयो भनेर जनवादी केन्द्रीयतालाई ठीक ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ भनेकाले गलत थिएन । प्रधानमन्त्रीको कुरामा एउटै पार्टी भएपछि बाबुरामजी नहुने भन्ने त आउँदैन । स्वयं अध्यक्षले नै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । मननयोग्य कुरा त उहाँ धोबीघाटले होइन चारबुँदेले प्रधानमन्त्री बनेको हो नि । रातको बेलामा सातजनामध्ये पाँचजनालाई थाहै नदिई उहाँहरू दुईजनाले सम्झौता गर्नुभयो । त्यो सम्झौता गलत भयो । अध्यक्षले वैशाखमा र सरकार बनाउने बेला बिगार्नुभएको छ । यसको मतलब बाबुरामजी जानुहुँदैन भन्ने होइन । हाम्रो मान्यतालाई छोडेर कोही पनि जानुहुँदैन भन्ने हो । यहाँले प्रधानमन्त्री बन्नेमा हाम्रो पनि हात छ कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो, त्यो बिल्कुलै होइन ।
धोबीघाटको मास्टरमाइन्ड त तपाईं हो भनिन्छ नि ?
होइन, सबै हो । धोबीघाटले कसैलाई पनि बिगारेको छैन ।
अध्यक्षलाई ठेगान लगाउन ?
अध्यक्षलाई ठेगान लगाउन धोबीघाट पर्दैन । अध्यक्षले पो हामीलाई ठेगान लगाइसक्नुभयो ।
वैशाखमा दुईजनाले घाँटी जोडेको कुरा गर्नुभयो, तपाईं भारतीय जेलमा हुँदै उहाँहरू ऐतिहासिक चुनवाङ्मा एकअर्कामा विलीन हुनुभएको होइन र ?
उहाँहरू ऐतिहासिक चुनवाङ्मा एकअर्कामा विलीन हुनुभएको हो तर बालाजु र खरिपाटीमा हामीले अलग्गै धार लग्यांै । हामीले त्यो तरिकाले जान सकिंदैन, जनताको सङ्घीय गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर पालुङ्टारसम्म अध्यक्षसँगै थियौं । तर त्यो करेक्सन लाई वैशाखको बैठकले फेरि उल्टाइदियो ।
सुनिन्छ तपाईंको पक्षमा तीन प्रवृत्ति छन् । सिद्धान्तका लागि बलिदान दिन चाहने कर्मठ र इमानदार र जो नेता छन् तर स्थापित भएका छैनन् र तेस्रोमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएपछि तपाईको नजिक आएका छन्, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? अवसरवादी धार तपाईसँग छैनन् र ?
पहिलो कुरा, पार्टीभित्र विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छ नै । हाम्रो पार्टीका विभिन्न विचार समूहमा पनि प्रवृत्ति र कमीकमजोरी छन् । ती कुरा हामीले सच्याउने कुरा भए । दोस्रो कुरा, मन्त्री नपाएर यस्तो भयो भन्ने दुष्प्रचार असाध्ये प्रचार गरिएका छन् । यदि मन्त्री नपाएर यत्रो बिगि्रएको हो भने त हाम्रो पक्षलाई उहाँहरूले बुद्धिमत्ता पुर्‍याएर जम्मै मन्त्री दिए त भइहाल्यो ।
गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा त उठेको हो नि ?
कुन मन्त्रालयमा को बस्नुपर्छ भनेर विवाद भएपछि अर्काे पक्षले दाबी गर्नु भएन नि, त्यसो भए । आफू दाबेदार पनि नहुने र अरू दाबेदार भयो भनेर चार्ज लगाउने मान्छेले आफू दाबेदार नहुनुपर्ने हो नि । त्यो वाहियात कुरा हो । त्यसैले यी मन्त्रीका कुरा नगरांै । दुई लाइन सङ्घर्षको ओज र गरिमा ध्वस्त हुन्छ यस्ता कुराले । धोबीघाटको गर्नुहुन्छ भने अध्यक्षको निम्ति जम्मै हुने पदको लागि ।
-हाँस्दै अलिकति गयो भने डराइहाल्ने । अरूलाई पदको लागि गरेको भन्न पाइन्छ । धोबीघाटको बेला उहाँ -अध्यक्ष) सन्त्रासमा हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई ठोक्नै खोजेको हो । उहाँको अलि बढी भयो भनेर हामी अलि कस्सिएकै हो । हामीले उहाँलाई धेरै पटक भनेका छांै, धोबीघाटमा तपाईर्ंकै विरुद्ध गएकै हो । उहाँलाई ठ्याक्कै धोबीघाटमा चोट लाग्यो । आफूलाई जुन ठाउँमा चोट लाग्यो र जसलाई लाग्यो उहाँनै पदको लागि रहेछ भन्ने देखियो नि । उहाँ धेरै वर्ष अध्यक्षमा बस्नुभएको छ । हामीले पद खोस्ने कुरा पनि छैन, चाहिएको पनि छैन ।
तपाइर्ंको निष्ठामा प्रश्न छैन तर तपाइंर्ंको पक्षमा लागेकाहरू कोही अवसरवादी छैनन् ?
अवसरवादीहरू जहाँ पनि हुन्छन् भनेर पहिला पनि भने नि । समाजै यस्तो भएकाले हाम्रो र अर्काे पक्षमा त्यस्ता प्रवृत्ति रहेका छन् । प्रधानमन्त्री हुन किन त्यति मरिहत्ते गर्ने हाम्रा साथीहरूले? अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा त्यस्तो स्थानमा गएर किन ध्वस्त पार्न किन मरिहत्ते पार्ने ? त्यसकारण प्रवृत्तिहरू गलत छन् । कसैलाई दोष दिए पनि हुँदैन । हामीलाई सोझ्याउने तरिका हो, त्यो नितान्त गलत छ । यो दुव्र्यवहार गरेको भनेर पुष्टि हुन्छ ।
वामपन्थी नेता गोञ्जालोले जेलबाट सन्देशले पठाउनुभएको छ त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यहाँ अवसरवादलाई सही सावित गर्नको निम्ति गोञ्जालोको घोडा चढेको हो । हामी गोञ्जोलालाई सम्मान गछांै तर जेलमा भएको मान्छेले नेपालको राजनीतिको बारेमा यस्तो उस्तो भन्न सक्दैन । अर्काे गोञ्जालो बिग्रन सक्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ? कुनै जमानामा राम्रो गरेका मान्छेहरू अर्काे जमानामा आएर बिग्रन सक्छ । तर अहिले उहाँको पुरानो छबिबाट नाजायज फाइदा उठाउन खोजिएको हो ।
भनेपछि, रिमको पत्रमार्फत पार्टी फुटाउन तपाइर्ंलाई उक्साएको भन्न खोजेको प्रचारलाई के भन्नुहुन्छ ?
रिममा हाम्रो पार्टी पनि थियो, त्यो बेला । साथीहरूले रिमको कुरा उठाएर किन यस्तो गर्नुहुन्छ ? अहिले रिम छैन । तर रिममार्फत पार्टी फुटाउन खोजिएको छ भनेर हामीहरूलाई भनिएको छ । कसैले भन्दैमा हामीले पार्टी फुटाउने होइन किनभने यो हाम्रो देशको कुरा हो नि । तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हरेक पार्टीलाई सुझाव दिने पनि हुन्छ तर सुझाव मान्ने नमान्ने हाम्रो आˆनो कुरा हो । हामीले विभिन्न पार्टीको कुरा गर्छाै भने उनीहरूले पनि बोल्न सक्छन् । त्यसैले पार्टी फुटाउन खोजियो भनेर प्रचार गर्नु पनि गलत हो ।
जनविद्रोह नगरिकन शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाज परिवर्तन गर्न सकिन्न ?
शान्तिपूर्ण रूपमा सम्भव भए त हामीले दश वर्षसम्म हतियार उठाउनुपर्ने नै थिएन । हामीले मात्र होइन, नेपाली काँग्रेसले सात सालमा, एमालेले २८ सालमा बन्दुक उठाउनुपर्ने नै थिएन । विश्वलगायत यहाँ पनि क्रान्ति गर्न बन्दुकको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले हामीले बन्दुक उठाएको हो । फेरि क्रान्ति पूरा भएको छैन । यहाँ पनि यही बन्दुकको बलमा आएको हो । मुख्य भूमिका जनताकै छ । अहिले जनताको समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ भने ठीकै हो । वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय हक अधिकारको स्थापित, मजदुर र किसानको अधिकार स्थापित, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने, राज्य पुनःसंरचनामा जनजातिको हकअधिकारलाई स्थापित गर्ने कि नगर्नेलगायत देशको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता यावत् समस्यालाई नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्‍यो भने बन्दुक उठाउनुपर्दैन । गरिएन भने आन्दोलन उठिहाल्छ । जसरी २०४७ सालमा बनेको संविधान विश्वको उत्कृष्ट भनिएको थियो तर आन्दोलन त उठिहाल्यो । त्यसैले राम्रो संविधान देश र जनताको पक्षमा बनाउनुपर्छ, भएन भने फेरि आन्दोलनमा जानुपर्छ ।
शान्ति र संविधानको कार्यदिशाको विपरीत जनवादी क्रान्ति गर्न सकिन्छ भनेर फरक मत राख्नुभएको छ । यो जनविद्रोह गर्ने तयारी हो ?
जनविद्रोह हाम्रो प्राथमिकता होइन । मेरो प्रस्तावमा यदि साँच्चिकै देश र जनताको पक्षमा शान्ति र संविधान बन्छ भने ठीक भनेको छु । त्यसरी संविधान बन्दैन भने क्रान्ति त पूरा गर्नुपर्छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेका छौं नि, दुई कार्यभारहरू, एउटा त जनवाद स्थापना गरेर जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा अधिकारसम्पन्न गर्ने र दोस्रोमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने हो । यो भयो भने जनवादी क्रान्ति पूरा हुन्छ, भएन भने त्यसको निम्ति गर्नुपर्छ ।
दुई दशकदेखि अध्यक्ष र तपाईं सँगै हुनुहुन्छ तर अहिले धेरै दूरी बढ्दै गएको छ कारण के हो ? यति धेरै कटुता किन ?
हाम्रो निकटता भनेको देश, जनता र क्रान्तिको पक्षको निम्ति मिलनबिन्दु हो । यो बाट यताउति भएपछि दूरी बढिहाल्छ तर ब्यक्तिगत रूपमा रिस, राग र रिसइबी छैन । उहाँलाई म सम्मान गर्छु र गर्दै आइरहेको छु । जनताले विश्वास गरेकाले जनपक्षीय शान्ति र संविधान उहाँलाई गर्नुस् भनेको हो तर उहाँ विचलित हुनुभयो भने त कसरी मान्ने ? मान्ने कुरै आएन ।
उहाँहरूको सबै खराब, तपाईर्हरूको सबै राम्रो यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
एउटा क्राइटेरिया त चाहियो नि, के गरेपछि राम्रो र के गरे पछि खराब ? निरपेक्ष खराब र राम्रो भन्ने त आउँदैन नि । त्यस्को लागि शान्ति र संविधान मापदण्ड हो । देश र जनताका लागि अधिकतम गर्ने हो तर उहाँले छोड्दै छोड्दै जानुभयो । जसरी उहाँले उठाउनुभयो नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएको भन्ने कुरा छ, त्यो त भएन । हेर्ने कोण र सिद्धान्त त फरक छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेे उसको सिद्धान्त अनुसार हेर्छ ।
तपाईर्कै पार्टीका उपाध्यक्ष डा. भट्टराईको सरकारलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
उहाँको सरकार त छ तर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा चलाइरहनुभएको छ । सरकार चलाउने पार्टीमा सात सदस्यीय संयन्त्र छ तर अहिलेसम्म यो विषयमा बैठक बसेको छैन । विचित्र छ । आ—आˆनै ढङ्गले चलाइरहनुभएको छ । मैले त उहाँको सरकार फिर्ता हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै राखेको छु । पार्टी निर्णयविपरीत थुप्रै काम भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनेको हो । त्यही विषयमा पार्टीमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ ।
उहाँले आˆनै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ नि ?
अध्यक्षले उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो भने त हाम्रो विरोध हुन्छ । काँग्रेसले बाबुरामको हातबाट अपमानजनक सेना समायोजन, शान्ति र संविधानका लागि माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराउन सकुन्जेलसम्म उहाँलाई दिने सुर छ । गराइसकेपछि अन्तिममा काँग्रेसले सरकार चलाउने भन्ने गोप्य सहमति छ भनिन्छ, त्यो कति सत्य हो त्यो पछि थाहा होला । म त्यस्तो सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भन्दिनँ ।
यहाँहरू कस्तो र कसको नेतृत्वमा बनाउन चाहनुहुन्छ ?
पहिला, यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ । गोकर्ण रिसोर्टमा चार पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने र कस्ाको नेतृत्वमा भन्ने जिम्मा दिइए पनि धेरै समय भइसकेको छ । पछिल्लो कालमा सातबुँैदे सहमतिसँग नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने छ । सबैको सहमति हुनुपर्छ ।
बाबुरामलाई हटाउने भएपछि तपाईंको पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ कि अरूको ?
हामी हाम्रो पार्टीको दाबी त गर्छाैं । दाबी गर्दैमा हुँदैन, सबैको सहमति हुनुपर्‍यो, काँग्रेसको पनि दाबी हुन्छ । एमालेले पनि गर्ला । तर सबैको सहमति जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ । तर सबैले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सहमति गरोस् भन्ने हो ।
अन्त्यमा, तपाईंलाई नेपाली जनताले कसरी हेर्दिओस् भन्ने लाग्छ ?
म देश र जनताका पक्षमा लागिरहेको छु । मलाई देश र जनताका पक्षमा लागेको मान्छेको रूपमा हेर्दिओस् भन्ने लाग्छ ।